“Tokkommaan Oromoo baranaa baay'ee nagammachiiseera” - Doktar Nagaasoo Gidaadaa
Ummatni Oromoo keessumaa waggaa lamaan darbanii as dargaggoo, shamarree, jaarsa, jaartii utuu hinjedhin tokkummaadhaan gaaffiilee, yaadaafi komiiwwan qabu dhiyeeffachaa jira. Mirgaafi faayidaa isaa kabajchiisuufis carraaqqii sabichi taasisaa jiru cimee itti fufeera. Oggantoonni mootummaa naannichaas gaaffiileefi komiiwwan ummatichi deebisuuf akkasumas mirgaafi faayidaasaa kabachiisuuaf carraaqqii cimaa taasisaa jiru.
Doktar Nagaasoo Gidaadaa gaafdeebii dhiyeenya kana Gaazexaa bariisaa waliin taasisaniin, “Tokkommaan Oromoo baranaa baay'ee nagammachiiseera. Ummaticha biratti tokkummaan kanaan dura hinjirre mul'achuu jalqabeera. Tokkummaa kana kan fide tokko irreecha baranaati. Ummatni Oromoo miliyoonaan ba'ee karaa nagaatiin of ijaaree abbootiin Gadaas sirna Gadaatiin ayyaanicha eggeessuun ayyaanicha karaa nagaatiin kabajee galuusaati. Ayyaanni Irreechaa baranaa ummatni Oromoo saba kabajamaafi beekaata'uu agarsiiseera.
Walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa gidduutti barana mudates karaa badaadhaan ta'us tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti bu'aa buuseera.
Sababa walitti bu'iinsa daangaa naannolee lameen gidduutti uumameen lammiileen kumaootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'anii kaampii taa'aa jiru. Rakkooleen daangaan walqabatanii mudatan kunniin dafee furmaata argachuu qabu.
Rakkoolee gama kanaan jiran akka furamaniif lammiilee sababa daangaatiin qe'ee ofiirraa buqqa'an dafanii bakka jireenyaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun yaadasaani goolabu.
Torban kana/This_Week 12404
Guyyaa mara/All_Days 1821824